Home Wararka Al-shabaab oo sheegtay inay weerareen gaari ay saarnaayeen garsoorayaal Kenyaana
Dagaalameyaasha Al-shabaab ayaa weeraray gaari ay saarnaayeen garsooyal Kenyan ah oo gaaray ilaa 6 garsoose oo kusocdaalayay degaanka Langu ee Magaalada Lamu.
Sarkaal u hadlay laamaha ammaanka Kenya ayaa sheegay in laba kamid ah garsoorayaasha uu dhaawac aan halis ahayn kasoo gaaray rasaastii ay dagaalamayaasha al shabab ay huwiyeen gaarigii ay la socdeen iyagoo kasoo laabtay maxkamad degaankaasi kutaalay.
Sidoo kale warbaahinta Kenya ayaa tebinaysa in Dagaalamayashaasi sidoo kale ay weerareen laba gaari oo ay lahayd shirkad dhismo balse dadkii saarnaa ay baxsadeen rasaastaasi markii lagu furay.
Maalmihii lasoo dhaafay deganada xeebta dhaca iyo xuduuda Kenya Somalia la wadaagto waxaa kusoo xoogaysanayay wererada al shabab ay ka geesanayan
Previous articleSadaq John oo ka mid noqday xildhibaanada maanta la soo xulay
Next articleDjokovic came and went from the Park Hotel. Ismail is one of those left behind
Wasiirka Maaliyadda oo soo saaray warkhad uu ku sheegay in baaritaankii...